Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Kenya » Kenya Airways sidina farany London
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fiaramanidina • etn • Lahatsoratra mampiavaka • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Vaovao momba ny dia any Kenya • fanorenana • Tourism • Vaovao momba ny fitaterana • Travel • Toerana fitsangatsanganana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza • Vaovao momba ny dia any UK
Kenya Airways dia manidina ny sidina farany ho any Royaume-Uni anio, mametraka ny tenany handresy ny fe-potoana torohevitra ho an'ny fitsangatsanganana manomboka amin'ity zoma ity.
Ny UK dia namoaka mpanolotsaina momba ny dia ary tsy hanaiky teratany vahiny avy na avy any Kenya manomboka amin'ny 9 aprily.
Mba hihaonana amin'ny fitomboan'ny tinady ny dia alohan'ny hanaovana ny mpanolo-tsaina dia nanampy ny sidina fampodiana an-tanindrazana ny Kenya Airways.
Azon'ny mpanjifa atao koa ny manova famandrihana ho amin'ny dia any aoriana na mangataka famerenam-bola tsy misy sazy.
Tongava amin'ity alakamisy ity Kenya Airways sidina farany tany London dia hitranga aorian'ny nanampiany sidina an-tanindrazana 2 hihaonana amin'ny fitomboan'ny tinady amin'ny dia any UK alohan'ny fampiharana ny toro-hevitra momba ny dia tamin'ny herinandro lasa teo.
“Noho ny fitomboan'ny fangatahana ny dia mankany UK alohan'ny fampiharana ny mpanolotsaina ny 9 aprily dia nanampy sidina vaovao miisa 2 izahay tamin'ny 4 sy 8 aprily,” hoy ny vakiteny avy amin'ny foiben'ny kaompaniam-pitaterana renivohitra any Kenya Nairobi.
Manomboka amin'ny 9 aprily, tsy hanaiky teratany vahiny ny UK avy any na avy any Kenya mankany amin'ny seranam-piaramanidiny, ao anatin'izany ireo mpandeha fitaterana izay mety handalo ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Jomo Kenyatta (JKIA) any Nairobi.
"Ireo mpanjifa voakasik'ity toromarika ity dia mety hanova ny famandrihany ho an'ny dia any aoriana na hangataka famerenam-bola miaraka amin'ny sazy rehetra navela", hoy ny mpitantana ny kaompaniam-pitaterana.
Kenya Airways dia manompo ny faritra Afrikana Atsinanana ary ampahany ny fanjakana afovoany afovoany sy ny nosy eo amin'ny sisin-tany atsinanan'ny Ranomasimbe Indianina.
Fialantsasatra ao Thailand Songkran: tsy misy karantina na hidina